News @ M-Media - Page 3236 of 3727 -
အရပ် လက်မဝက်ပိုရှည်တဲ့ မနက်
သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ M-Media Knowledge ကဏ္ဍ ရှာဖွေတင်ဆက်သူ – မိုးတိမ် သင်သိပါသလား? သင် ညဖက်အရပ်အမြင့်တိုင်းပြီး မနက်ဖက် ပြန်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါ လက်မဝက်လောက် ပိုရှည်တယ်ဆိုတာကို သိလား? ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့[Read More…]
August 31, 2013 — ထွေရာလေးပါး
Mobile ဖုန်းလိုင်းဆက်သွယ်မှု ပြတ်တောက်မှုများကြောင့် ပြည်သူများ အခက်အခဲဖြစ်
သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၃ M-Media သုတ ရန်ကုန် ။ ။ ရန်ကုန်မြို့တွင် သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းအတွင်း GSM ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်မှုများကြောင့် ပြည်သူများအကြား ဆက်သွယ်မှုကိစ္စရပ်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်မအလုပ်က ဖုန်းနဲ့အမြဲဆက်သွယ်ပြောဆိုနေရတာ။ ဒီရက်ပိုင်း[Read More…]
မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်ခံများ ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံသို့ စာပို့
သြဂုတ် ၈၁၊ ၂၀၁၃ M-Media KK မိတ္ထီလာ ။ ။ မိတ္ထီလာမြို့ အကြမ်းဖက်ခံများနှင့်ပတ်သက်သည့် သဘောထားတင်ပြချက်မှတ်တမ်းများကို အကြမ်းဖက်ခံများကိုယ်စား ဦးအောင်သိန်း(တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)မှ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံသို့ ပေးစာတစ်စောင်ကို သြဂုတ်လ ၂၇-ရက်နေ့က ပေးလို့လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ဤပေးစာတွင်[Read More…]
သြဂုတ် ၃၀ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းတို
သြဂုတ် ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၃ M-Media လယ်မြေသိမ်းခံရသည့် ကိစ္စများ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့ သူရဦးရွှေမန်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်သို့ သဝဏ်လွှာပို့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့ လယ်ယာမြေတွေကို အစိုးရအဖွဲ့က အချိန်မဆွဲဘဲ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက[Read More…]
August 30, 2013 — သတင်းများ
Previous 1 … 3,234 3,235 3,236 3,237 3,238 … 3,725 Next